Nolosheena maalinlaha ah, waxaan inta badan isticmaalnaa cajalad, meelo kala duwanna, nooca cajaladda la isticmaalay iyana way kala duwan tahay. In kasta oo cajaladdu ay aad ugu habboon tahay in la isticmaalo, haddana waxaa jirta dhibaato caadi ah, taas oo ah, aad bay u adag tahay in laga saaro raadadka uu cajaladdu reebay ka dib isticmaalka. Dad badan ayaa dooran doona inay isticmaalaan shukumaan qoyan ...
Markay timaaddo cajaladda aluminiumka, waxaan aaminsanahay inaad taqaanid. Nolosheena maalinlaha ah, waxaan inta badan arki karnaa alaabta korontada. Kuwa soo socdaa waa hordhac kooban oo ku saabsan adeegsiga cajaladda aluminiumka? Marka hore, cajaladda aluminiumku waxay ka samaysan tahay adhesi cadaadis xasaasi ah oo tayo sare leh ...
Soo -saaridda iyo sifooyinka cajaladda warqadda guud ee kraft
Cajaladda warqadda kraft-ka ah ee aan caadiyan isticmaalno waxay ka samaysan tahay warqadda kraft sida maaddada asaasiga ah, oo lagu daboolay koollo biyo-milmaysa oo la qalajiyey. Hadda waxay u samaysantay cajaladdii warqadda kraft -ka ahayd ee aannu naqaannay. Cajaladahaan warqadaha kraft -ka ah waxay leeyihiin adhesion xoog leh, iyo sababta oo ah adeegsiga warqadda kraft, stre…
Aluminium -bireed -Muraayadda Muraayadda Muraayadda, Wejiga Labaad ee Xoojiya Aluminium-ka Wajahaya, Sidee u Kululaan Kartaa Cajaladda Fiilooyinka Aluminiumka, Fiilooyinka Aluminium ee Hal-dhinac leh, Sharooto, Intertape Polymer Group Aluminium -bireed,